Qaar ka mid ah Talooyin sahlan oo laga yaabo in la yareeyo kuwa udub dhexaad u leh inay ula tacaalaan qalabka loo yaqaan "Malware"
Sannado yar ka hor, Cyphort ayaa sheegtay in khiyaaladda internetka ay kor u kaceen 400% marka loo eego sanadihii hore. Malvertisements waa noocyada ugu badan ee xayeysiis ah ee ku dhejiya nidaamka kombiyuutarka tiro badan. Marka aad gujiso xayeysiisyadaas, waxaad u badantahay inaad noqotid dhibbane fayraska iyo nadaafada.
Alexander Peresunko, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Maamulaha Guud ee Macaamiisha, ayaa ka digay in weeraryahanku fulinayo istaraatiijiyadaha noocaas ah si loo xado macluumaadkaaga gaarka ah iyo lacagtaada. Waxay bixiyaan booska cinwaanka si ay u helaan khaladkooda ku xiran xayeysiinta. Sida fariinta phishing, malvertisers waxay isku dayaan in ay isticmaalaan dadka isticmaala xayeysiinta cudurka qaba maalin kasta.
Malvertisers Isticmaal Istaraatijiyooyin Suuqgeed
Waa run in shabakadaha xayeysiinta ay siiyaan hab dhamaystiran oo loogu talagalay weerarrada si ay u habeeyaan xayeysiinta iyo xayeysiinta halista ah. Qaar ka mid ah shirkadaha ayaa ka dhigaya xayeysiisyada la arki karo saacad kaliya oo keliya lacageed. Marka qof isticmaala ereyada muhiimka ah ee ku jira sanduuqa raadinta, isaga ama iyadu waxay u badan tahay in lagu jiheeyo xayeysiisyada xaasidnimo. Xayeysiinta noocan oo kale ah waxay inta badan u muuqdaan qaab daaqad-furan oo ay ku jiraan nacas iyo fayras oo tiro badan. Waxay ku soo jiidanayaan adiga oo bixinaya qaddar qurux badan si aad uga jawaabto su'aalo dhowr ah ama gujinaya xiriirada la bixiyay. Iyadoo loo marayo xayeysiisyadaas, weeraryahannadu waxay beegsanayaan dad badan oo maalin walba ah gaar ahaan shirkadaha caalamiga ah, hay'adaha ammaanka, iyo isbitaallada.
Sida looga fogaado Malvertisements
Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn waa sida looga fogaado malvertisements..Halkan waxaan ka wada hadalnay waxyaabo yar oo aad u baahan tahay inaad xasuusato.
Browser-ka taariikhda ah
Marka hore, waa inaad si joogto ah u cusbooneysiiso faallalkaaga. Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, malvertisements ayaa adeegay xirmooyinka furfuran ee Angler. Waa nooc khaas ah oo khalad ah oo xayiraya bartaada internetka oo xadidaya galitaankaaga internetka. Habka ugu fudud ee loo hagaajin karo waa iyada oo la cusbooneysiinayo daalacashadaada iyo pluginsaga hal mar toddobaadkii. Boog cusub oo cusub lama qaadi doono waxyaabo nacas ah iyo fayrasyo.
Ma aha khalad in la yidhaahdo ma jirto wax bedel ah barnaamijyada antivirus. Waxay ku dhejin karaan nidaamyadaada waxayna kaa caawin karaan inaad ka fogaato nacas iyo fayras si aad u badan. Barnaamijyada antivirus waxay u dhaqmaan sidii lakab difaac ah oo ka dhan ah xayawaanka iyo xayeysiisyada cudurka qaba.
Waa inaad marwalba isticmaashaa xayiraadaha xayeysiiska ah ee kugu caawiya inaad hoos u dhigto dhammaan xayeysiisyada cudurka qaba. Marka ay timaado isticmaalka website-yada, badiba xayeysiisyada waxay ku jiraan nadaafad iyo fayrasyo, iyo habka kaliya ee looga takhalusi karo waxay ku beddelaysaa ad-blocker-kaaga. Qaar ka mid ah boggaga internetka, si kastaba ha ahaatee, waxay sii wadaan dakhligooda waxayna soo saaraan lacago badan oo ay kuugu fidiyaan xayeysiis ammaan ah oo ammaan ah. Raadinta boggaani waa mid adag, sidaa daraadeed waxa fiican inaad haysatid xayiraadaha xayeysiiska ah oo aad dib u cusbooneysiiso
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan waxaad isku dayi kartaa inaad xirto siyaabaha u muuqda in ay horey u galaan URL ee sanduuqa raadinta ee daalacayaashooda. Waa hab fudud oo ammaan ah, iyo daalacayaasha lagu dari karo waxaa ka mid ah Mozilla, Google Chrome, iyo Firefox. Marka ay bogagga interneetka ee HTTPS ay ka soo rogaan naqshad ka socota barnaamijyada HTTP aan hubin, waxaa laga yaabaa in lagaa digo taas oo ku saabsan mudadaas gudahood. Tusaale ahaan, Mozilla ayaa uga digay isticmaalaha labadaba tobankii tobnaad ee cabbirka astaanta si ay u badbaadaan internetka Source .